मन परेको मान्छेलाई ७ स्टेपमा आफ्नो बनाउने सुत्रहरू Nepalpatra मन परेको मान्छेलाई ७ स्टेपमा आफ्नो बनाउने सुत्रहरू
Silhouette young lovers on background of horoscope and love concept.
मन परेको मान्छेलाई ७ स्टेपमा आफ्नो बनाउने सुत्रहरू । राम्रो देखिनु तपाईंको हातको कुरा हो, आफूलाई राम्रो देखाउन तपाईंको हातको कुरा हो । नेपाली भाषामा मायाको सामान्य अर्थ कुनै जीव-प्राणी अथवा वस्तु प्रति मनैदेखि चाहनाको अनुभव गर्नु अथवा लगाव महसुस गर्नु वा एक ब्यक्तिको अर्को ब्यक्ति वा वस्तु प्रतिको आकर्षण हो । दिमाग भित्र हुने रसायन प्रतिक्रियासंग मायाको सम्बन्ध हुन्छ; त्यही रसायनले मायाको अनुभव उत्पन्न हुन्छ; जसलाई फिनाइल–इथायल–अमाइन (Phenylethylamine) भनिन्छ । कुनै पनि मान्छेलाई आफूतर्फ आकर्षित गर्ने काम निक्कै जटिल काम हो । यहाँ कुनै पनि मन परेको मान्छेलाई ७ स्टेपमा आफ्नो बनाउने सुत्र ७ स्टेपको चर्चा गरिएको छ ।
दिमाग भित्र हुने रसायन प्रतिक्रियासंग मायाको सम्बन्ध हुन्छ; त्यही रसायनले मायाको अनुभव उत्पन्न हुन्छ; जसलाई फिनाइल–इथायल–अमाइन (Phenylethylamine) भनिन्छ । कुनै पनि मान्छेलाई आफूतर्फ आकर्षित गर्ने काम निक्कै जटिल काम हो ।
४. उसलाई मनपर्ने कुरा थाहा पाउनुस्
#मन परेको मान्छे